Ajajaawwan baafataa armaan gadii wardiidhaaf jiraatu.
Baafatni kun ajajaawwan qabeentoota galmee ammaa keessa jiran gulaaluuf fayyadan qaba.
Baafatni kun ajajaawwan to'annaa agarsiisa agartiirraa galmeedhaaf fayyadan qaba.
Baafatni saagii ajajaawwan maalimaa haraa, kan akka man'eewwanii, tarreewwanii, wardiiwwanii fi maqaawwan Man'ee wardii ammaatti saaguuf fayyadan of keessa qaba.
Baafatni Dhangii ajajaawwan man'eewwan filaman, wantoota, fi qabeentoota man'ee galmee keetii dhangeessuuf fayyadan of keessa qaba.
Ajajawwan baafata Deetaa waardii ammaa keessaa deetaa gulaaluuf fayyadan fayyadami. Hangii deetichaa qindeessuu, fooyuu, fi gingilchuu, bu'aa herreeguu, deetaa toorii, kana booda DataPilot banuu nidandeessa.
Baafatni Meeshaalee ajajaawwan qubeeffaannoo mirkaneessuuf, wabii wardii barbaaduuf, dogoggora baasuufi mul'annoo ibsuudhaaf fayyadan of keessaa qaba.
Ajajaawwan foddaalee galmee too'achuu fi agarsiisuuf fayyadan of keessaa qaba.